अरुण फाइनान्सको १००% हकप्रद खुल्यो, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » अरुण फाइनान्सको १००% हकप्रद खुल्यो, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - अरुण फाइनान्सले १००% हकप्रद आज देखि बिक्री खुला गरेको छ । फाइनान्सले १ः१ अनुपातमा १५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो ।अरुणले प्रतिकित्ता हकप्रद १०० रुपैयाँ दरले बिक्री खुला गरेको छ । हकप्रद भर्ने अन्तिम म्याद भने असोज ९ गते तोकिएको छ । हाल अरुणको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्रीपछि यसको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनेछ । फाइनान्सले हकप्रद बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आविधिक कर्जा हायरपर्चेज कर्जा, व्यापारिक कर्जा, कृषि कर्जा र आवासीय कर्जामा उपयोग गर्ने जनाएको छ ।